Inani eliphansi le-TPU Hambayo Case Printer China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta yecala ephathekayo yefoni,I-UV Hambayo Case Iphrinta Yokuthengiswa,I-Phone Phone Case Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Inani eliphansi le-TPU Hambayo Case Printer
Iphrinta yecingo yefoni ingabalabala kalula ngokunyathelisa ngqo izithombe zakho ozithandayo. Yonke icala lefoni noma amaphaneli weselula okwamukela, igumbi lokuhlangana, ihhovisi, umzila, ihhotela, indawo yokudlela, ibha, isikole, isakhiwo sezemidlalo, i-showcase, isitolo, i-medical, i-show show, inkomfa, igumbi lezemidlalo njll ngaphakathi nangaphandle.
Intengo ephansi A3 uv iphrinta uhlobo lwe "non-contact" inkinobho jet uhlobo imishini digital, TPU Hambayo Case Printer application iningi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
1. Ukunambitheka komuntu ngamunye komuntu siqu.Iphrinta yekhalenda ye- Transparent Phone , uma nje uthanda, yenza ubunikazi befoni / shell / cell cell, ecacile nobuciko, phakamisa ibanga lakho.
Izici eziwusizo ze- UV Phone Case Printer yethu yokuthengiswa RF-A3UV:
I-Phone Phone Case Printer Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Iphrinta yecala ephathekayo yefoni I-UV Hambayo Case Iphrinta Yokuthengiswa I-Phone Phone Case Printer Iphrinta yeThebula ephathekayo Iphrinta ye-UV ephathekayo yaseKorea Iphrinta ye-UV ephathekayo eTaiwan Iphrinta ye-UV ephathekayo yaseMelbourne Iphrinta ye-UV ephathekayo eJalimane